I-Croft Collective - I-Airbnb
Benderloch, Scotland, i-United Kingdom
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Sophie
U-Sophie Ungumbungazi ovelele
I-Croft yethu iyindawo enokuthula eyenzelwe ukukuvumela ukuthi uphinde uxhumane nomhlaba okukuzungezile. Okuhlangenwe nakho kwethu kokuphila kugridi kukunika ithuba lokunciphisa ijubane nokwamukela ehlane lakho elingaphakathi.
Izindikimba ze-crofting zokusimama, ukuzanelisa nokuthembela emvelweni yimibono esikholelwa ukuthi ifanelekile kakhulu namuhla kunanini ngaphambili.
I-Croft Collective iyindlela yethu yokukuvumela ukuba uphile njengoba sike senza futhi siyazuza ekujabuleleni izinto ezilula ekuphileni.
Le ndlu inqanyuliwe emaphandleni kagesi, okukuvumela ukuba uphile kalula kodwa kukho konke ukuphila okulula. Inekamelo lokulala elilodwa elintofontofo lamapulangwe, elilungele ukuphumula kwezithandani.
Uzogcinwa ufudumele ngesitofu sezinkuni egumbini lokuphumula, okwenza ukuthi ishawa nezinto zikagesi zasekhishini zinikwe amandla ngegesi. Kulabo abafuna ukuhlala bexhumekile, sinikeza amaphakheji ebhethri avuselelekayo ukuze kugcinwe amadivayisi akho ekhokhisiwe.
Sinikeza ubhavu wezinkuni we-alfresco ukuze ujabulele ukunethezeka okuhamba phambili kokugeza okuzungezwe yimvelo. Kukhona nomgodi womlilo wangaphandle ongakwazi ukujabulela isibhakabhaka sasebusuku uphuze ikhofi lakho elisanda kubaswa noma i-malt whisky eyodwa.
Okufakiwe ekuhlaleni kwakho:
1) I-croft yakho efihlekile engekho kugridi yendabuko ekamelweni lokulala elilodwa eliphakeme.
2) Ibhishi langasese
3) Isidlo sasekuseni esitholakala endaweni
4) Ubhavu wamapulangwe wangaphandle
5) Umgodi womlilo
wokukhempa 6) Isitofu sezinkuni
7) Ikhishi - elinazo zonke izitsha nezinto zokupheka ozozidinga ukuze upheke ngaphakathi nangaphandle
8) Izibani zesiphepho zendabuko zokukhanyisa
9) I-shower negumbi lokugezela
elisebenza ngegesi 10) Iphakethe lokushaja amandla kwamafoni namanye amadivayisi.
U-Jojo Mackenzie uzoba umbungazi wakho phakathi nokuhlala kwakho e-Croft. Uyatholakala nganoma yini ongayidinga phakathi nokuhlala kwakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Benderloch namaphethelo